प्रचण्डको गृहजिल्लामा कांग्रेसको कब्जा, चितवनमा खुसीयाली, खुमलटारमा झड्का ! – " सुलभ खबर "
प्रचण्डको गृहजिल्लामा कांग्रेसको कब्जा, चितवनमा खुसीयाली, खुमलटारमा झड्का !
काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को गृहजिल्ला चितवनमा नेपाली कांग्रेसले तीन वटै वडामा जितेर कब्जा जमाएको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय प्रचण्डको राजनीतिलाई नै धक्का पुर्‍याउने गरी कांग्रेसले कब्जा जमाएपछि प्रचण्डको काठमाडौंको निवास खुमलटारमा झड्का लागेको छ ।
कांग्रेसले जितेपछि चितवनमा खुसीयाली छाएको छ । शनिबार उपनिर्वाचन परिणाम आएपछि आईतबार कांग्रेसले चितवनमा भव्य विजय जुलुस निकालेको छ ।
चितवन जिल्लाको खैरहनी नगरपालिका–५ मा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार प्रतिमा कार्कीले जितेकी छन् । कार्कीले नेकपाका उम्मेदवार पुननारायण प्रधानलाई पराजित गरेकी छिन् । कांग्रेसकी उम्मेदवार प्रतिमा कार्कीले ८ सय ४२ मत पाउँदा प्रधानले ७ सय ५६ मत मात्रै पाएका छन् ।
चितवनकै खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा कांग्रेसका देवबहादुर बस्नेतले १ सय ५२ मत अन्तरले जितेका छन् । बस्नेतले नेकपाका वेदबहादुर अधिकारी हराएका हुन् । बस्नेतले १ हजार १ सय ३८ मत पाउँदा अधिकारीले ९ सय ८६ मत मात्रै पाएका छन् ।
चितवनकै भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १६ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अमृतराज हमाल विजयी भएका छन् । हमालले नेकपाका भक्तराज हमाललाई ३ सय ८ मतान्तरले परास्त गरेका छन् । कांग्रेसका हमालले ३ हजार १ सय ८३ मत ल्याउँदा नेकपाका भक्तराज हमालले २ हजार ८ सय ७५ मत पाएका छन् ।
प्रचण्डको गृहजिल्ला चितवनमा उपनिर्वाचन भएका सबै वडामा कांग्रेसले जितेर कम्युनिस्टको किल्ला भत्काएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्डकी छोरी रेनु दाहाल मेयर भएपनि त्यहाँको वडामा पनि कांग्रेस नै जितेको छ ।